Somalilad: Siyaasi Cabdikariin Axmed Mooge, ayaa ka sheekeeyey dhibba
Home Somali News Somaliland: Cabdikariin A Mooge Oo Afka U Furtay Shirkadda Dp World Iyo...
Siyaasi Cabdikariin Axmed Mooge, ayaa ka sheekeeyey dhibbaatooyin iyo hadimooyin tira badan oo shirkadda Dp World ay hore uga geysatay wadamo badan oo ay hore uga soo shaqeyn jirtay, waxaana uu mid mid u soo bandhigaya wadamadaasi iyo dhibbaatooyinkii ay ka geysatay.
Akhri :- qoraal amuurtaas ka hadlaaya oo aanu ka soo xiganay bogga Siyaasi Cabdikariin Axmed Mooge, waxaana uu u dhignaa sidan:-
“DP World tariikhdeeda ayaa ka marag kacaysa in ay tahay shirkad hadimo, si aan taas shacabka ugu cadayno waxaan soo qaadan doona wadamo dhawr ah oo DP World ay jajamisay oo halkii ay horumar ka egayeen ku hambabaray horumar la’aan iyo dib u dhac ku yimi dekadohoodi! Qormadan waxaan ku soo qaadan doona wadanka Yemen oo DP world ay la gashay sanadkii 2008 heshiis 30 sano ah oo looga gol lahaa in lagu horumariyo Dekada Aden si aan wax ugabarano wixii qabsaday qayrkeen!!
Waxay ahayd 2008 markii dawlada Yemen, ay heshiis la gashay shirkada DP World, Yemen heshiiskaa ka dib waxay filaysay in Dekada Aden ee dhacda afaafka laga soo galo Bada Cas oo ah dekad ahmiyaddeeda leh marka laga hadlaayo goobta ay ku taal si loo gaadhsiiyo dekadaha horumaray. Heshiiska ay Yemen la gashay DP World oo ka faahfaahsanaa kan Somaliland la gashay DP World, waxa uu si cad u qeexayay in kor looga qaado 500,000 ee koontinar ee markaa dekadu handhalgarayn jirtay sanadkii oo la gaadhsiiyo ilaa 900,000 oo koontinar sanadkiiba.
4 sano ka dib halkii Yemeni ka eegaysay horumar waxa soo baxday in looga sii daray dekadoodi oo halkii ay 500,000 oo koontinar ka handhalgarayn jirtay lana filaayay in la gaadhsiiyo ilaa 900,000 oo koontinar sanadkii ay hoos ugu soo dhacday wax ka yar 130,000 koontinar iyo waliba in aanay DP World oofin balanqaadyadii ku cadaa heshiiska ee in Dekada Aden ay DP World geliso ilaa 220 milyan oo dolar oo lagu horumarinaayo dekada oo qudha.
Dawladii markaa jirtay ee Yemen, markii ay ku dawakhday sida wax yihiin waxa loo xilsaaray in hayadooda la-dagaalanka musuqmaasuqu ay dib u eegis ku samayso heshiiska lala galay DP World, warbixintii ay hayadasi soo saartay waxay ku soo gabagabaysay in aanay DP world oofin balanqaadyadi ku caada heshiiska. Warbixintaas ayaana horseeday in dawlada Yemen ka baxdo heshiiskaas iyada oo dawlada Yemen lagu xukumay in ay u celiso DP World 35 milyan oo dolar, hada waa dekadoodi oo la xidhay ayay hadana dib u bixinayaan 35 milyan oo dolar si ay isaga eryaan DP World!
Markii lagu dhawaaqay in heshiiskaas la buriyay shacabka reer Yemen waxay isugu soo baxeen dabaaldegyo ay ku mujinayaan sida ay ugu faraxsanyihiin in la eryo DP World, waayo shacabku waxay arkayeen in la dhacay!!!. ” ayuu yidhi
Sweden: Oo Dub U Celinaysa Tiradii ugu Badnayd ee Qaxootu Magan galyo Doon ah oo Dalkeeda Ku Sugan
Somaliland: Why Veteran Muse Biixi Abdi is the President in waiting? – Ahmed Abdi Isse
Somaliland: Maxamuud Xaashi: Shirka Xisbiga Ee April Miyuu Ka Dhex Tartami Doonaa Mise Ka Hor Ayaa Saaxadda Xisbiga Laga Saari Doonaa?